बाल्यकालको दशैँ « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :3October, 2019 5:10 pm
जस्तो सुकै समस्यामा भएपनि दशैँ शब्द सुन्ने बित्तिकै कसलाई खुशी लाग्दैन होला र ? अझ बाल्यकालमा बिताएकाे दशैँको पल नै बेग्लै थियो । दशैँ आउनु एक महिना अघिदेखि नै मनमा एक किसिमको छुट्टै रमाइलो अनुभूति हुने गर्दथ्यो।
नयाँ लुगा लगाउने, मिठामिठा परिकार खाने, हासखेल गर्दै साथीहरुसँग रमाइलाे गर्ने, आहा ! कति रमाइला थिए ति दिनहरु । अहिले अतितलाई सम्झना गर्दा मनमा आनन्दको महसुस पैदा हुन्छ । दशैँको कुरा सुन्नासाथ मलाई आफ्नो जन्मथलो सिन्धुलीको यादले धेरै सताउने गर्दछ । जब सोह्रश्राद शुरु हुन्छ त्यति बेला देखिनै दशैँका लागि के–के सामान किन्नु पर्ने हो त्यो सबको लिस्ट बनाउँथे म।
आफ्नो घरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने कुराले मलाई सारै साताउँथ्यो । घर परिवारमा म अरु भन्दा अलि फरक सोच भएको थिए किनभने मलाई आफू र आफ्नो घरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने कुराले सधैँ सताउँथ्यो। दशैंमा अत्यन्तै व्यस्त भइन्थ्यो। चिउरा कुट्ने, धान कुट्ने, घर पोत्नको लागि माटो लिन जाने जस्ता विभिन्न कामले घर परिवारका सबै सदस्यलाई सताउने गर्दथ्यो।
घरको तल्लो र माथिल्लो तला दुबै माटाकाे गाह्रो थियो । सानो भएपनि राम्रो र चटक्क मिलेको थियो घर । घर रङ्गाउने काम मम्मीलाई भन्दा पनि मलाई धेरै हतार हुन्थ्यो, किनभने मलाई साथीहरुको घर भन्दापनि मेरो घर राम्रो देखिनु पर्ने । त्यसैले सकि नसकि भित्तामा मुढा रखेर भएपनि ममिसँगै कुचाले रातो माटो र सेतो माटो लगाउने गर्दथेँ । सोह्रश्राद्धदेखि नै घर आँगन सफा राख्ने, कपडा धुने काममा व्यस्थ हुन्थेँ म।
सानो परिवार भएकाले होला मलाई हरेक काम गर्न सजिलो हुन्थ्याे । परिवारका सबैजना मिलेर एउटा–एउटा काम भाग लागाएर कसले पहिला काम सक्ने भन्ने हुन्थ्यो। सबैले छिटो–छिटो काम गर्न थाल्थ्याैं। गाउँघरका सबै दाजुभाइ मिलेर पिङ हाल्नका लागि जंगलमा गएर खर ल्याउने गर्थ्याैं अनि मात्र दशैँ आएको जस्तो महसुस गरिन्थ्यो।
म अलि सानै थिए । दशैँमा पैसा धेरै हुन्छ भनेर गाँउ भरी टीका लगाउन जान्थेँ। मम्मी बाबाले थोरै पैसा दिनुभयो भनेर कति घण्टासम्म रिसाएर बस्थेँ । तर अहिले मामाघर, काका, काकीको घरमा गएर टीका लगाउन पनि असजिलो र लाज लाग्छ । तर अहिले बाबा मम्मीले टीका लगाएर नयाँ नोट दिँदाको क्षण बेग्दै हुन्छ ।
पहिलेको जस्तो दशैँ अहिले रमाइलो कहाँ हुन्छ र ? घर परिवारबाट टाढा भएपछि भनेको समयमा घर पुग्न सकिँदैन। तर पनि दशैं आएकाे चाल पाएपछि छुट्टै आनन्दकाे महशुस हुन्छ ।
खाडीको एउटा सिपाही
खै, कहाँबाट शुरु गरौँ, जीवनका तितामिठा पलहरु । जीवनका अधुरा सपनाहरु, वास्तविक भोगाइहरु अझ भन्नूपर्दा
पत्रकारितामा नैतिकता घटेकै हाे त ?
पत्रकारिताको मानक हुन्छ, नैतिक मूल्य, मान्यता र विवेक । तर जब पत्रकारले नै सामाजिक एवं
‘राष्ट्रिय पहिचान जोगाऔँ, नेपाली हुनुको दात्यिव पूरा गरौँ’
उमा अधिकारी नेपाल एक ऐतिहासिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातिको साझा फुलबारी हो । साथै सार्वभौमसत्ता
उ कहाँ जाने हो ? को हो ? कता बस्छ केही पनि थाहा थिएन। म
आइतबारका सय समाचार
गोपाल पाठक / विनोद लामिछाने/अनिश्मा बस्नेत काठमाडौं । जनता टेलिभिजनमा आज (आइतबार) प्रसारण गरिएका एक सय समाचारको संगालो नै शत्…
भ्रष्टाचारको मुख्य माध्यम : नीतिगत निर्णय